I-Pixel 3 XL Lite iye yavuza iGeekbench Benchmark | I-Androidsis
IPixel 3 XL Lite ihamba ngeGeekbench kwaye ityhila ukuba yakhiwe nguFoxconn
Kunyaka ophelileyo kuye kwavela iindaba zohlobo lwe Iifowuni zeGoogle Pixel 3. Kodwa yayingengawo amarhe kuphela. Kwakukho iifoto ezininzi ezithunyelwe kwi-Intanethi eziqinisekisa ubukho befowuni.
Ingxelo yamva nje ithi kuya kubakho izinto ezimbini ezahlukeneyo: inye IPixel 3 iLite kunye IPixel 3 XL Lite; ngoku le yokugqibela ivele kwiGeekbench.
Ibekwe uphawu njengo "Foxconn Pixel 3 XL", Igama ebhaliswe phantsi kwalo kwindawo yogcino lwedatha, ityhila ukuba imveliso iphethwe nguFoxconn, ophethe imveliso yePixel 3 kunye nePixel 3 XL.
IPixel 3 XL Lite eboniswe kwiGeekbench
Isixhobo esivavanywe izolo siyasebenza I-Android 9 Pie, ingenzeka njani ngenye indlela, kwaye isebenza ngeprosesa I-Qualcomm Snapdragon 710 i-core-core. Oku kwahlukile kwinto esiyiva malunga nefowuni enefayile ye- I-chipset ye-Snapdragon 670. Ayisiyiyo kuphela i-terminal eza ne-chipset enamandla ngakumbi, ikwanayo ne-6GB ye-RAM, eyona iphezulu esiyibonileyo kuyo nayiphi na iGoogle smartphone.
I-Pixel 3 XL Lite ifumene amanqaku e-1,805 kuvavanyo lwe-single-core kunye ne-5,790 yamanqaku kuvavanyo lwe-multi-core. Amanqaku ayafana nezinye iifowuni, ezinje nge Mi 8 SE, esebenza nge-chipset efanayo.
I-Pixel 3 Lite eyahlukileyo kulindeleke ukuba iphumeze kwifayile ye- kwikota yesibini, ebonakala ngathi ikude. Nangona beza kuza nee-specs ezingenamandla, kuye kwaxelwa ukuba banekhamera efanayo nePixel 3 kunye nePixel 3 XL, ke uya kuba nayo amandla omfanekiso onomtsalane ukuba ezi fowuni ziphambili zifezekise. Abalindelwanga ukuba badanise kweli candelo, nangona bengabonisi iingxaki ezininzi kunye ezahlukeneyo apho iimodeli zabo zoqobo zingazange zigcinwe, nokuba zingaphi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IPixel 3 XL Lite ihamba ngeGeekbench kwaye ityhila ukuba yakhiwe nguFoxconn
Oppo ukwazisa itekhnoloji ye-10X Optical Zoom ngoJanuwari 16
Ukuhlaziywa kwezokhuseleko ngoJanuwari ngoku kuyafumaneka kwi-Samsung Galaxy J4